Otu Womenmụnwaanyị na Menmụ nwoke Si Eji Media na Ekwentị Ekwentị | Martech Zone
Otu Womenmụnwaanyị na Menmụ nwoke Si Eji Social Media na Ekwentị Dị iche
You maara na ụmụ nwanyị nwere ike igwu egwuregwu na ekwentị ha, o yikarịrị ka ọ ga-amasị ụdị iji nweta azụmahịa ma yikarịrị ka ha ga-eji mobile na mgbasa ozi ọha na eze na-edebe taabụ na ezinụlọ ma na-ekwurịta okwu?
Ihe dị iche iche nke nwoke na nwanyị gbara gburugburu ebe atọ dị iche iche: mmekọrịta onwe anyị na nke ọkachamara, mkpa maka ozi na ntụrụndụ, na omume ndị ahịa. Na ederede ahụ, anyị kwadebere ihe omuma a dabere na akụkụ ndị ahụ maka ịmatakwu banyere etu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị si adị iche. E nwere ọdịiche dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwoke na-ejikarị mgbasa ozi ọha na eze eme ihe maka azụmahịa na mkpakọrịta nwoke na nwanyị, ebe ụmụ nwanyị na-enwe mmekọrịta, ịkekọrịta, ntụrụndụ, na enyemaka onwe onye.
Ghọta ndị na-ege gị ntị bụ isi mgbe ị na-emepe ọdịnaya - yabụ ịmata ihe ọdịnaya nwere ike ịba na okike ị na-achọ ịdọta dị ezigbo mkpa… ozi sitere na FinancesOnline.com akọwapụta ụfọdụ isi ihe dị iche.
Tags: Financesonline.comndikomụmụ nwoke na ụmụ nwanyịụmụ nwoke na ụmụ nwanyịekwentị mkpanaakaruby mediaruby media ụlọ ọrụeji usoro mgbasa ozindị inyomụmụ nwanyị na ụmụ nwokeụmụ nwanyị na ụmụ nwoke
Curated Social Media Amamihe si Top Enterprise ọkachamara
Ntuziaka kachasị mma iji kọwaa vidiyo (yana ihe atụ)